Mety Tsy ho Mafy Be Ihany Hay ny Onitra Aloa Raha Misy Mandika ny “Zo Hohadinoina” Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jolay 2015 8:24 GMT
Mety tsy ho henjana noho izay nantenaina ny onitra ho an'ireo milina fikarohana tsy nahavita nanatontosa ny fangatahana “zo hohadinoina”. Sary namboarin'i Tetyana Lokot.
Rehefa nandany tamin'ny herinandro ny fampidirana ny “zo hohadinoina” amin'ny internet rosiana tamin'ny herinandro, dia nanamarika ankehitriny ireo mpanao lalàna ao amin'ny Duma fa hohalefahin-dry zareo ny sazy amin'ny fanitsakitsahana ny tenin'izany lalàna izany.
Leonid Levin, lehiben'ny komitin'ny Duma nijery indray ny volavolan-dalàna izay hametraka ny onitra amin'ny tsy fanatanterahana ny “zo hohadinoina,” no niteny tamin'ny sampana fahampahalalam-baovao RBC fa mila ovaina ny fiteny misy ankehitriny ao amin'ny volavolan-dalàna. Araka ny napetraka tao amin'ny Duma, ny lalàna dia mampandoa onitra 300.000 robla ($5300) avy hatrany ny mili-pikarohana internety, rehefa hitan'ny fitsarana fa nandà ny fangatahana mifanaraka amin'ny lalàna avy amin'olona iray hamafa rohy mankany amin'ny karazana fampahafantarana manokana [ny tompon'ny milina]. Raha mbola mitsipaka ny fanatanterahana izany ny mili-pikarohana rehefa nisy didim-pitsarana nivoaka dia mety hiaktra hatramin'ny 3 tapitrisa robla ($53.400) ny onitra.
“Tafahoatra ilay lalàna ary mila ahitsy ny filàna sasantsasany,” hoy ny fanazavan'i Levin amin'ny tokony hanamboarana indray ny rijanteny ho rehefa tsy manaiky ny hanatontosa ny didim-pitsarana ihany ny mili-pikarohana hamafa ireo rohy voatondro ho mifanaraka amin'ny arofenitry ny “zo hohadinoina” vao hosaziana onitra. Amin'ny teny hafa, tsy mila matahotra ny orinasan'ny internety hoe vao tsy manaiky ny fangatahan'olona iray izy dia mandoa onitra avy hatrany.
Solontena iray avy ao amin'ny Vondrona Mail.ru no niteny tamin'ny RBC fa dingana iray mankany amin'ny lalana marina ny fanalefahana ny onitra mifandraika amin'ny “zo hohadinoina”, na dia mbola mitsipaka hatramin'ny fotony ilay lalàna hatrany aza ireo orinasa.
Tamin'ny zoma 3 jolay lasa teo, nolanian'ny Duma Rosiana ny volavolan-dalàna farany izay ahafahan'ny tsirairay hanery ny mili-pikarohana hamafa ireo rohy mety ahitana fampahafantarana momba azy ireo. Raha vao lanian'ny antenimiera ambony ny volavolan-dalàna dia mankany amin'ny filoha Vladimir Putin izay heverina fa hanasonia azy io.
Tamin'ny May 2014, nahita ny Lapan'ny Fitsarana ao amin'ny Vondrona Eoropeana fa manan-jò amin'ny mili-pikarohana tahaka ny Google ny tsirairay hanaisotra ny sasantsasany amin'ireo vokatra miresaka ny momba azy ireo. Hatramin'ny nisian'io fanapahan-kevitra io ny Google irery dia nanombana fa mihoatra ny iray tapitrisa ny rohy mila esorina (hita amin'ny fangatahana mihoatra ny 279.000), manaisotra ny 41,3 isanjaton'ireo rohy ireo.